मनेल लोरेरो: उहाँ को हुनुहुन्छ र कुन लेखकहरूले यस लेखक लेखेका छन् | वर्तमान साहित्य
एनकर्नी आर्कोया | | लेखकहरू
फोटो स्रोत Manel Loureiro: Libertaddigital
Manel Loureiro को नाम पक्कै तपाइँलाई परिचित लाग्छ किनकि तपाइँले सुन्नुभएको छ। यदि तपाईं उत्सुक पाठक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यसको केही पढ्नु भएको हुन सक्छ। यदि होईन, र तपाईं टेलिभिजन, रेडियो वा प्रेसमा नियमित हुनुहुन्छ भने, तपाईं यसमा पुग्न सक्नुहुनेछ। र यो यो हो कि यस लेखक, पत्रकार र वकिलले कलम (र ओठ) लाई कसरी उनको काम गर्ने भनेर जान्दछन्।
तर, मनेल लोरेरो को हो? तपाईले कुन पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ? यदि तपाईं यस लेखकलाई भेट्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई उहाँको बारेमा सबै जान्दछौं।
1 मनेल लोरेरो को हो?
2 कुन पुस्तकहरू मनेल लोरेरोले लेखेका छन्
2.2 अन्धकार दिनहरू
2.3 गेम अफ थ्रोन्स: भ्यालेरियन स्टीलको रूपमा धारिलो पुस्तक
2.4 धर्मी को क्रोध
2.5 अन्तिम यात्री
2.8 ढोका, Manel Loureiro सबैभन्दा रहस्यमय थ्रिलर
मनेल लोरेरो को हो?
Manel Loureiro Pontevedra मा डिसेम्बर ३०, १ 30 ५ मा जन्म भएको थियो। उनले सान्टियागो डे कम्पोस्टेला विश्वविद्यालय बाट कानून मा स्नातक गरे, त्यसैले उनी एक वकील हुन्। जे होस्, आफ्नो विद्यार्थी दिन को समयमा उनीसंग टेलिभिजन सम्बन्धी जागिरहरु को लागी अवसर थियो। सुरुमा उनले यो कार्यक्रमको होस्टको रूपमा गरे तर पछि उनले लिपिहरूसँग व्यवहार गरे जब उनले महसुस गरे कि उनको साँचो चाहना कानून थिएन, न त पत्रकारिता वा टेलिभिजन, तर लेखन।
अवश्य पनि, यसले त्यसलाई हटाउँदैन मिडिया मा सहयोग जारी राख्नुहोस्। र यो यो हो कि उहाँ गलिसिया टेलिभिजनको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ, अब उनी ला भोज डे गलिसिया, एबीसी अखबार, एल मुन्डो, जीक्यू पत्रिका जस्ता अखबारहरूमा सहयोग पुर्‍याउँछन् तर रेडियोमा पनि विशेष गरी क्याडेना सेर र ओन्डा सिरोमा। तपाईले उनीहरुलाई टेलिभिजनमा देख्न सक्षम हुनुभयो, विशेष गरी कुआत्रोको क्युआटो मिलेनियो कार्यक्रममा, जहाँ यसको २०१ since देखि आवधिक अनुभाग रहेको छ।
उनको पहिलो उपन्यास एक ब्लग को माध्यम बाट आयो। र यो यो हो कि उनले आफुलाई आफ्नो क्षणहरूमा पुस्तकहरू लेख्न समर्पित गरे र यो यस्तै सफलता थियो, डेढ लाख भन्दा बढी अनलाइन पाठकहरूको साथ, जब उनले यो समाप्त गरे, यो प्रकाशित भयो। र यो पनि निराश भएन; यो छोटो समयमा एक बेस्टसेलर थियो, जसले धेरै प्रकाशकहरू यस लेखकको पक्षमा ध्यान दिन बाध्य तुल्याए जसले स्पेनी जनतामा मात्र होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बढि ध्यान आकर्षण गरे। त्यसकारण, त्यो पहिलो पुस्तक, प्रकाश जेड पछि, धेरै वर्षमा धेरै ठाउँ छुट्याइयो (२०११ मा मात्र उनले दुई पुस्तकहरू प्रकाशित गरे)।
एक जिज्ञासाको रूपमा, हामी तपाइँलाई भन्नेछौं कि उनको पहिलो उपन्यास देखि एक बोर्ड खेल छ। यो कथा प्रकाशित भएको बेला भीड कोष को माध्यम बाट वित्त पोषित भएको थियो।
मनेल लोरेरियो गर्व गर्न सक्दछन् किनभने उनी स्पेनका केही लेखक हुन् जसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बेच्ने पुस्तकहरूको सूचीमा काम गरेका छन्, जुन प्राप्त गर्न सजिलो छैन।
कुन पुस्तकहरू मनेल लोरेरोले लेखेका छन्
El पहिलो पुस्तक जुन मनेल लोरेरियोले प्रकाशित गर्‍यो Apocalypse Z, २०० 2007 मा, डोल्मेन पब्लिशिंग हाऊसद्वारा (यद्यपि तीन बर्ष पछि यो अर्को पब्लिशिंग हाउस, प्लाजा र जेनेस द्वारा पुनः प्रकाशित गरिएको थियो)। त्यो पल देखि, र उहाँ देखीएको सफलता देखेर, उहाँले लेखन को लागी अधिक समय समर्पित गर्न थाल्नुभयो, र बर्षहरु को लागी उहाँ द्वारा लिखित अधिक पुस्तकहरु आइपुगेको छ। हामी तिनीहरूलाई समीक्षा गर्दछौं।
सभ्यता अब अवस्थित छैन।
त्यहाँ कुनै इन्टरनेट छैन। टेलिभिजन छैन। न मोबाइल।
तपाईलाई सम्झाउने कुनै चीज छैन अब तपाई मानव हुनुहुन्छ।
सर्वनाश सुरु भएको छ।
अब त्यहाँ एक मात्र गोल बाँकी छ: बचाऊ।
यसैले कथा सुरु हुन्छ जहाँ एक भाइरस कुनै ग्रह बिना संयन्त्र बिना फैलियो र यो संक्रमित सबैलाई मार्यो। समस्या के छ भने, केहि घण्टा पछि, त्यो मरेको मान्छे फेरि जिउँदो हुन्छ र एकदम सम्क्रमित तरिकामा त्यसो गर्दछ।
स्पेनमा, एक युवा वकिल डायरी राख्ने जिम्मामा छन् जसमा उनले दिनभर उनले देख्ने सबै अवलोकनहरू लेख्दछन्। जबसम्म उनी उसको घरभित्र पस्दैनन् र ऊ गालिसियामा भाग्नुपर्दछ, केवल अब यसको अर्को नाम छ: अपोक्यालिस जेड।
अपोकालिस जेडका बचेका मानिसहरूले क्यानरी टापुहरूमा पुग्न प्रबन्ध गर्छन्, अन्डेडबाट सुरक्षित क्षेत्रहरू मध्ये एक। तर उनीहरूले त्यहाँ के पाउँछन् एक सैनिक राज्य एक गृहयुद्धमा डुबेको छ, अनिकालको जनसंख्या र बाँच्नको लागि शायद कुनै संसाधनहरू छन्।
यो हो उनको पहिलो कथा को दोस्रो भाग, जुनमा उनले आफ्नो उपन्यासको मुख्य पात्र उद्धार गरे जसले म्यानल लोरेरोलाई यति सफल बनायो, र फेरि उनलाई आफ्नो जीवनलाई सताउनबाट बचाउन समस्यामा पार्छ।
गेम अफ थ्रोन्स: भ्यालेरियन स्टीलको रूपमा धारिलो पुस्तक
यो पुस्तक वास्तवमै उहाँद्वारा पूर्ण रूपमा लेखिएको थिएन, उहाँ केवल एक सह-लेखक हुनुहुन्थ्यो र, जसको नामले देखाउँदछ, यसले गेम अफ थ्रोन्स श्रृंखला र श्रृंखलामा भएको प्रतिक्रियको बारेमा कुरा गरेको थियो।
धर्मी को क्रोध
जोम्बी सर्वनाशबाट बाँचेकाहरूसँग एउटा मौका छः उनीहरू समुद्रको बीचमा पृथ्वीमा छोडेको अन्तिम संगठित समूहहरूमध्ये एउटाद्वारा बचाइएको छ। उनीहरुको उद्धारकर्ताहरु संगै बाध्य, उनीहरु मेक्सिको को खाडी, एक ठाउँ हो कि एक रहस्यमय उपदेशक को उदार शासन अन्तर्गत फस्टाउँछ जस्तो लाग्छ।
यो बारेमा छउनले प्रकाश Z को अन्तिम पुस्तक, जहाँ लेखक एक पटक फेरी एक बढ्दो हिंसात्मक संसार मा बाँच्न को लागी कोशिश गरीरहेछ बचेको समूह राख्छ। यद्यपि मानवले सिकेको छैन र अझै महत्वाकांक्षी, झूटा र छली छ, त्यसैले नायक र उसका साथीहरूले एकपटक फेरि अवरोधहरू पार गर्न प्रयास गर्नुपर्नेछ।
अगस्त १ 1939 ३।। एक विशाल सागर लाइनर नाम Valkirie अटलांटिक महासागर मा टाढा देखिन्छ। एउटा पुरानो यातायात जहाजले यसलाई संयोगले फेला पार्दछ र यसलाई बन्दरगाहमा पुर्‍याउँछ, त्यहाँ केही महिनाको बच्चा बाँकी रहेको पत्ता लागेपछि ... र अरु केहि पहिचान गर्न सक्षम छैन।
एउटा रहस्य, Years० बर्ष पछि, यसले धेरैलाई विचलित पार्छ, यस बिन्दुमा कि एक व्यापारीले जहाजलाई जिउँदो पार्ने निर्णय गरे जुन मार्गमा उसले विगतमा गरेको कुरालाई उत्तरको खोजीमा गरेको थियो। र निस्सन्देह, जो डु the्गा मा छन् उही चीजलाई फेरि हुन बाट रोक्न को लागी पर्याप्त स्मार्ट हुनु पर्छ।
Cassandra को जीवन लगभग सही छ जब सम्म उनी एक अनौंठो यातायात दुर्घटना भोग्छन् कि उनलाई कोमामा छोडिन्छ। केही हप्ता पछि, र एक चमत्कारी निको भएपछि, Cassandra ले थाहा पायो कि उनको सारा विश्व पूर्णरूपमा परिवर्तन भएको छ: कसैले उसको घर र परिवारको डण्ड गर्न शुरू गर्यो र उनी पनि पनी विचलित पनी पीडित छिन् जुन उनी नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्।
नायक उनी मात्र एक महिला हुन् जसले आफ्नो जीवनलाई वशमा राख्न सक्दैनन् भन्ने महसुस गर्छिन्, बरु, यो "उत्पीडन" हिंसाले भरिएको, हत्या र न्यायद्वारा खोजीको अर्थ हो कि उसलाई के भइरहेको छैन थाहा छैन। सावधान रहनुहोस्, यद्यपि यो एक थ्रिलर जस्तो देखिन्छ, वास्तवमा यसलाई डरावनीको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ (हामी तपाईंलाई किन त्यसो गर्दैनौं)।
यहाँ Manel Loureiro पाठक तपाइँ तपाइँको प्रियजनहरु को रक्षा गर्न को लागी बलिदान गर्न को लागी इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने बारे मा बहस मा भाग लिन को लागी खोज्छ।
त्यतिबेला कसैलाई थाहा थिएन कि के भइरहेको थियो। केवल मानव जीवन को धेरै दिन को लागी आत्महत्या भएको थियो। बाँचेकाहरूमध्ये १re वर्षीया अन्द्रिया, टुहुरा र टुहुरो शून्य छन। ती दिनहरु बाट, उनी मात्र सम्झीन् कि कसरी उनी एक सैन्य ट्रक मा भयभीत नागरिकहरु बाट भरीएको थियो एउटै खतरा बाट भाग्दै थिए।
una apocalyptic कहानी जिसमें पात्रहरूले गोप्य राख्दछन्, यद्यपि उनीहरू आफैले यो जान्दैनन्। यद्यपि यस पुस्तकको सुरूवात भए पनि सत्य यो हो कि मनेल लोरेरियो पछि अझ टाढाको भविष्यमा गइरहेकाछन् जसमा संसार परिवर्तन भएको छ र बचेका मानिसहरू र वंशजहरु "मानवता" को भग्नावशेषमा फर्केर "मानवता" मा फर्कने कोशिस गर्छन्। । तर त्यो हो जब एक पटक समाप्त भयो कि समाज फेरि प्रकट हुन्छ।
ढोका, Manel Loureiro सबैभन्दा रहस्यमय थ्रिलर
एक अनुष्ठान अपराध। एउटी आइमाई आफ्नो छोरालाई बचाउन बेकार छ। म्यानल लुरेरियो रहस्यमय र पौराणिक गलिसियामा एक थ्रिलर सेटको साथ आश्चर्यचकित हुन्छन्।
त्यसोभए तपाईं यस थ्रिलरमा के फेला पार्न लाग्नुहुन्छ संक्षिप्त गर्न सक्नुहुन्छ। छ गलिसिया मा सेट र यसमा तपाईसँग एक पुलिस अफसर, राकेल कोलिना हुनेछ, जो भर्खर आफ्नो छोराको उपचारको खोजीमा यस ठाउँमा आइपुगेका छन्। जे होस्, ऊ हत्या र अदृश्य हुन्छ जुन सम्बन्धित देखिन्छ। यसैले तपाईको अनुसन्धान भरमा तपाईले केस सुल्झाउने काम मात्र गर्नुपर्दैन, तर तपाईको बच्चाको जीवन बचाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ।
के तपाईं उनका कुनै पनि रचनाहरू पढ्ने आँट गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » मनेल लोरेरो
Corcira को दुष्ट
Kadin श्रृंखला को किताब, Mujer वा Fuerza de Mujer को रूपमा परिचित